Ihe ncheta MH17 bụ ezigbo anya na-ahụ anya na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: Martin Vrijland
Ihe ncheta MH17 bụ ezigbo anya na-ahụ ihe niile na 'akwụkwọ ntanaka'
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 31 August 2016	• 12 Comments
Na Vijfhuizen na-abịa ngwa ngwa ihe ncheta na-echeta ndị ọdachi MH17 ahụ. Ọ bụ usoro nke MH17 Foundation nke National Ncheta. Ihe dị oke mma bụ ihe nnọchianya nke ihe ncheta ahụ. Anyị na-achọ maka anya na-ahụ ihe niile na akwukwo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dịka enwere ike ịhụ na ihe nkiri nke onye na-ese ihe banyere ihe ncheta dị n'okpuru. Tụkwasị na nke ahụ, rịbọn ahụ dị na mpaghara okirikiri nke sunflowers. Nke ahụ bụ ọtụtụ ihe nnọchianya na ncheta 1 merged. A na-eji obi ụtọ eji anya na-ahụ ihe niile na-ahụ maka mgbasa ozi, egwu na ụlọ ọrụ ihe nkiri na-achịkwa ndị otu ọkachamara. Nke a na-eme nke ukwuu ugbu a na ọ gafewo na oge na onye ọ bụla na-ele ya anya dị ka egwuregwu dị mma maka egwuregwu na ụdị ihe nnọchianya, n'okpuru okwu "The illuminati, hahaha, nke na-adịghị adị ma ọlị. " Ọ bụ eziokwu na anya na-ahụ ihe niile bụ ihe nnọchianya nke dị na Freemasonry.
Anya anya niile a na - ahụ anya ọ bụghị naanị na akara dollar, ma anyị na - ahụ ya n'ọtụtụ ebe; nakwa n'okpukpe. Anya anya ọhụhụ ọ bụla nke a na-ahụ anya mgbe ụgbọ njem na-ahụ maka ụgbọ elu na mgbe e mesịrị Cassini sere onyinyo nke South Pole nke planet Saturn. Ya mere, anyị na-agba ọsọ ozugbo na ihe nnọchiteanya Saturn. Òtù ndị ọgọ mmụọ (ndị Farisii) na ọha na eze ha na-eme ofufe Saturn. Ha na-egosi na na ihe atụ ha niile. N'amaghị ama, ihe kwekọrọ na ncheta MH17 bụ pyramid. Ọ nọ ebe ahụ kemgbe 2002 ma kpọọ ya 'Bigg Spotters Hill'. N'elu pyramid bụ ụlọ a na-akpọ Space Space. Ọtụtụ ndị maara ebe ahụ Mystery Land agba egwú.
Anya anya niile na pyramid na-ezo aka Saturn. Na anya anya nile na-ezo aka Saturn bụ nanị site na anya anya nke anya ọhụhụ nile na South Pole nke Saturn. Ebee ka akara pyramid si? Ihe kpatara ya ndị agha a dịka ọmụmaatụ, akara aka pyramid ahụ aka ha? Pyramid na-anọchite anya mbara ala 3 na 1, nke bụ ihe na-ezo aka na mbara ala 3 nke 1 na-ahụ anya dị ka a na-ahụ site na Ụwa; mbara ala Saturn, Venus na Mars. Ị nwere ike ịmara "atọ dị nsọ" a? Bible na-ekwu banyere atọ n'ime otu. Chi atọ a sitere na Chineke meputara ụdị ihe oyiyi na-agbanwe agbanwe na nhazi oge nke mbara ala, nke mbụ bụ ihe a na-ahụ anya site na Ụwa; ihe mkpofu plasma n'etiti Venus na Saturn nke gosiputara udi pyramid nke di na mbara igwe (lee vidio nke sitere na 2: 40 min.). Ikekwe, anyị niile jikọtara ọnụ maka eziokwu ahụ bụ na pyramid nke Giza dị n'Ijipt enweghi ihe kacha mma. Enwere otutu ihe banyere ya, dika ima atu, aro na nke a nwere ike ịbụ nke ọla edo ga-abụ. Kedu maka oke nke a dị na mbara igwe ma mechie pyramid ahụ? Na vidiyo ahụ ị nwere ike ịhụ na 2: 50 min. Otú ọ dị, m ga-adụ gị ọdụ ka ị lelee vidio ahụ dum nakwa ka ị mata ihe ndekọ banyere Immanuel Velikovsky na David Talbott.
Anyanwụflower na-ezo aka na Saturn. Sunflower na-anọchite anya onyinyo ahụ a na-ahụ anya site na ụwa mgbe Saturn bụ 'anyanwụ anyanwụ' nke mbara igwe anyị. Nhazi usoro nke Saturn, Venus, na Mars nke a na-ahụ site na mbara ala gosipụtara halo nke dị ka ifuru na-acha odo odo nke sunflower, n'ihi ịpụ plasma n'etiti Saturn na Venus. Isi ojii nke ifuru bụ isi ojii nke a na-ahụ site na ụwa, n'ihi na mbara ala Mars mere kpọmkwem etiti (lee vidiyo dị n'okpuru ebe a). A na-edozi ihe ndị na-enye anyanwụ na gburugburu bụ ihe ọzọ edere Saturn; ị maara na mgbanaka a na-ahụ anya na telescope infrared (lee foto NASA a).
Ịchọta ihe nnọchianya n'azụ akwụkwọ akụkọ ahụ nke osisi na-etolite na-egosi na ọ dị ntakịrị ikwubiga okwu ókè. Na agbanyeghị, ọ na-ele anya dịka 'achọrọ itinye nnu nnu niile"Ọ bụrụ na i chere na ị kpachara anya họrọ maka ihe nnọchiteanya nke na-aga na fhara na nke ha Ememme Saturn ezo aka. Otú ọ dị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ dị ịrịba ama. Ọ nwere ike ịgọrọ aka na Ribbon Society. Dị ka Wikipedia, na Ribbon Society karịsịa ndị na-ahụ maka ọrụ ugbo, ndị òtù ya bụ ndị Katọlik nke Irish. Dị ka Michael Tsarion akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ezo aka n'ụzọ doro anya na Ribbon Society na nke a bụ nkewa nke oge ochie nke ndị Hibernian. Okpukpe Hibernian a (ọha na eze nzuzo) ga-abụ n'azụ mgbanwe French. E jikọtara Ribbon Society na Giuseppe Mazzini, nwoke nke kachasị elu (33e) na klas ndị Scottish Rite, Albert Pike, na 1871 leta a dere na ọ ga-ebu amụma 3 ụwa agha. Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịsị na ọ bụ nhọrọ na-enweghị isi nakwa na rịbọn ahụ aghọwo ihe nnọchianya nke ncheta ma ọ bụ ịdị n'otu na afọ. N'ọnọdụ ọ bụla, okwu ahụ bụ 'ribbon' nwere nọmba numerological 33. Ya mere, nke ahụ nwere ike ịbụ na ị na-ezo aka n'elu n'elu nke Freemasonry (Nlekọta 33e); bụ ebe a na-ahụ ọbara pharaoh.
Ka anyị were ya na ọ bụ ihe ọ bụla na-adaba na ọ bụ naanị ihe ncheta (dị oké ọnụ ahịa) nke na-eje ozi iji sọpụrụ ọkọlọtọ ụgha a ma ọ bụ ọbụna hoax ọdachi nke ikuku, na ebumnuche iji bulie Ukraine ma tinye Russia dị ka onye iro. N'ezie, nke ahụ bụ mmalite nke agha ụwa ọhụrụ a na-adịghị ahụ anya n'ókèala ya, ma ajụjụ ahụ bụ oge ọ ga-ewe. Anyị ga-aga n'ihu ma ọ bụghị ahịa Machiavelli nke na Dutch Safety Board (OVV) natara n'oge na-adịbeghị anya. Ị gụrụ laghachi onwe gị ihe nke ahụ pụtara. A ga-emeghe ihe ncheta na 17 July 2017. Nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na uru ọnụọgụgụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: wikipedia.org, wikipedia.org, michaeltsarion.com, monumentmh17.nl
Samsung, Google, Cybernetics na nhazi mmekọrịta n'etiti mmadụ na igwe
Islam nwekwara ihe oyiyi Saturn nke 2
Nkwekọrịta dị n'etiti nsụgharị Hizt nke Hitler na Thule Society na Fetullah Gülen
Turkey: agha agha na Siria, njikọ dị na Russia na mmekọrịta na-akawanye njọ na NATO
Eentandaag 'Nchịkọta ma ọ bụ' usoro site Sjoerd Fennema zuru flop
Tags: agba, mh17, ncheta, mba, akara, Họrọ
JorisTruthseeker dere, sị:
31 August 2016 na 20: 33
na ihe ngosi nke ihe odide a na agbata obi yiri ka o nwere ihe swastika dị n'okpuru ....
31 August 2016 na 22: 06
31 August 2016 na 22: 12
31 August 2016 na 22: 24
31 August 2016 na 22: 28
Ị na-ahụ logo Shell n'ụzọ ọ bụla? Ị ghọtara na ndị isi ala na-aga ebe?
31 August 2016 na 22: 35
31 August 2016 na 22: 45
31 August 2016 na 23: 03
ị ghọtara na-acha ọbara ọbara ebe?
31 August 2016 na 23: 10
9 December 2017 na 09: 06
Na mgbasa ozi ọzọ a na-achịkwa, mana na-ekwusi ike na ọ bụ Putin na-emegide usoro ụwa ọhụrụ, ihe nzuzu nke 'kwere' nke ahụ.
9 December 2017 na 09: 10
9 December 2017 na 09: 22
" Nhọrọ 2017: ndị omeewu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọhụrụ na nkwa ụgha na-ebuli elu
Ịda ụda 7e na-ebu ụgbọ mmiri ụwa Hanjin na-eyi nhazi akụrụngwa ụwa egwu »
Nleta nile: 13.998.294
Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye na-echepụta ihe ọkụkụ na ibelata onu ogugu site na ihe omimi.
UN manifesto '90 na-egosi: usoro amuma iji chebe gọọmentị ụwa
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Ben op UN manifesto '90 na-egosi: usoro amuma iji chebe gọọmentị ụwa
Martin Vrijland op Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye na-echepụta ihe ọkụkụ na ibelata onu ogugu site na ihe omimi.
SandinG op Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye na-echepụta ihe ọkụkụ na ibelata onu ogugu site na ihe omimi.
SalmonInClick op Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye na-echepụta ihe ọkụkụ na ibelata onu ogugu site na ihe omimi.
Jikọọ ndị 1.684 ndị ọzọ debanyere aha